Neymar oo ugu dambayn go’aansaday Mustaqbalkiisa kooxda Barcelona – Gool FM
Neymar oo ugu dambayn go’aansaday Mustaqbalkiisa kooxda Barcelona
(Barcelona) 01 Luuliyo 2016 – Xiddiga xulka qaranka Brazil ayaa la la xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono kooxda Catalan xagaagan, PSG iyo Man Utd ayaana xiiseynayey, laakiin hadda waxa uu ku dhawaaqay inuu sii joogo doono garoonka Camp Nou.
Neymar waxa uu xaqiijiyey inuu sii joogi doono Barcelona, kaddib markii madaxweynaha kooxda Josep Maria Bartomeu uu daaha ka qaaday inuu rajaynayo in wiilka reer Brazil uu dhammaystiri doono heshiis ballaarin kooxda Barca ah maalmaha soo aaddan.
Ciyaaryahanka qaranka Brazil ayaa la la xiriirinayey inuu lacag wayn ugu dhaqaaqo midkood kooxaha Paris Saint-Germain ama Manchester United xagaagan, laakiin hadda waxa uu qalinka dul dhigayaa heshiis cusub oo uu ku sii joogi doono garoonka Camp Nou.
24-sano jirkaan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray: “Aad baan uu faraxsanahay inaan sii joogo Barcelona, waxaan idiin xaqiijinayaa inaan riyadaan ku sii noolaan doono, Barcelona kor, Catalunya kor”.
EURO 2016: Yuu xulka Portugal ku beegmayaa wareegga siddeed dhammaadka, yaase loo doortay Man Of The Match?
KA BOGO: Rikoodhadii laga diiwaan galiyay kulankii uu xulka Portugal ku reebay Poland, uguna soo baxay wareegga afar dhammaadka EURO 2016